Android 6.0 Marshmallow ကို သင့်ရဲ့ Nexus ဖုန်းမှာ ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ? – DigitalTimes.com.mm
Android 6.0 Marshmallow ကို သင့်ရဲ့ Nexus ဖုန်းမှာ ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ?
Creepy Tyler Dec 21, 2015
Android စနစ်ရဲ့ 6.0 Marshmallow ဗားရှင်းဟာ Nexus နဲ့ Android One ဖုန်းတွေမှာ စတင် အသုံးပြုလို့ ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ထို Update ကို ချက်ချင်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲဖို့အတွက် စိတ်မရှည်ဘူးဆိုရင်တော့ Manaul နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ Android Factory Image တွေကို Manual အားဖြင့် ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲပြီး Install လုပ်တဲ့အခါမှာ အခက်အခဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ဒါကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ အသစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ဒေတာ အားလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောက်ပါ အဆင့်များနဲ့ Manual အားဖြင့် Install လုပ်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ။
၁။ Android Studio Preview ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်းကို သင့်ရဲ့  Windows ကွန်ပျူတာမှာ ဒေါင်းလုဒ် ဆွဲပြီး Install လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင့် PC ရဲ့ Command Terminal က တဆင့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ADB နဲ့ Fastboot Programmers တို့ကို Install လုပ်ပါ။
၂။ PATH အတွင်းသို့ SDK folder ကို အောက်ပါ အဆင့်များအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။
၃။ My Computer မှာ Right Click ထောက်ပြီး Properties မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ။
၄။ Advanced System Settings ကို ကလစ်လုပ်ပါ။
၅။ System Properties ထဲက Advanced ကို ၀င်ပြီး Environment Variables ကို ကလစ်လုပ်ပါ။
၆။ Window အတွင်းမှာ Path ကိုရွေးချယ်ပြီး Edit ကို ကလစ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင် SDK folder ကို install လုပ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းနာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။(၀င်ရောက်မှုတိုင်းဟာ Semi-Colon နဲ့ ခွဲခြားထားတယ်ဆိုတာတော့ မမေ့ပါနဲ့)
၇။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ USB debugging ကို ပြုလုပ်ပါ။ ပထမဆုံး Settings ထဲကို ၀င်ရေက်ပြီး About Phone မှ တဆင့် Software information ကို သွားပါ။
၈။ Build number ကို ၇ ကြိမ် နှိပ်ပါ။
၉။ Settings အတွင်း ၀င်ရောက်၍ Developer Options အတွင်းမှ USB debuggging ကို အမှန်ပေးရွေးချယ်ပါ။
၁၀။ သင့်ရဲ့  ဖုန်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ Factory Image ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ။
၁၁။ Image ကို သင့်ရဲ့  ကွန်ပျူတာမှာ Extract ပြုလုပ်ပါ။ သင့်ကို tar ဖိုင်နဲ့ ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ဖိုင်ကိုလည်း Extract ထပ်လုပ်ပါ။
၁၂။ သင့်ရဲ့  ဖုန်းနဲ့ သင့် ကွန်ပျူတာကို USB က တဆင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
၁၃။ Fastboot mode ကို စတင်လိုက်ပါ။
ဒါကို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်ရဲ့ ဖုန်း လည်ပတ်နေစဉ်မှာ Key Combination ကို ဖိနှိပ်ထားဖို့ပါ။ Nexus5အတွက်တော့ အသံ ကျယ်တဲ့ ခလုတ် ၊ အသံတိုးတဲ့ ခလုပ် ကို ဖိနှိပ်ထားလိုက်ပါ။ ADB tool ကို အသုံးပြုပြီးတော့လည်း Fastboot mode ကို boot လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့်ထားပြီး Command Terminal ကို သွားပါ။ adb reboot bootloader ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ လိုအပ်လာရင်တော့ ဖုန်းရဲ့  Bootloader ကို သင့်ကွန်ပျူတာ က တဆင့် C ommand Terminal ကို အသုံးပြုပြီး Unlock ပြုလုပ်ပေးပါ။ Fastboot oem unlock ကို လုပ်ဆောင်ပါ။
၁။ Command Terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီး Zip မပြုလုပ်ရသေးတဲ့ System Image ရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
၂။ Zip မပြုလုပ်ရသေးတဲ့ Image ဖိုင်ရဲ့  တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ flash-all.bat ကို ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ ဒီ Script ဟာ လိုအပ်တဲ့ bootloader ၊ baseband firmware နဲ့ OS တွေကို install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းလမ်း အလုပ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တော့ သင့်အနေနဲ့ အဆင့် ၂ မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ADB နဲ့ Fastboot တို့ install ပြုလုပ်ထားတဲ့ System ရဲ့  Path အတွင်း ကို folder တစ်ခု ထည့်သွင်းဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ပြီးဆုံးသွားရင်တော့ Google က သင့်ကို သင့်အနေနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် bootloader ကို Lockပြုလုပ်ထားဖို့ အကြုံပြုပြောကြားလာပါလိမ့်မယ်။ USB ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်ထားစဉ်မှာ fastboot mode အတွင်း ဖုန်းကို boot ပြုလုပ်ခြင်း နဲ့ သင်ဒါကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Command Terminal ကို အသုံးပြုပြီး fastboot oem lock ကို လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
လောလောဆယ် Marshmallow ကို ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ Google Nexus 5, Google Nexus 6, Google Nexus72013, Google Nexus 9, Google Nexus Player, Google Nexus 6P, နဲ့ Google Nexus 5X တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး Applicationများ
Gionee က 5000mAh ဘက်ထရီရှိတဲ့ Marathon M5 Enjoy ဟန်းဆက်ကို ထုတ်လုပ်